Xagee waasaska lagu tuuraa: talooyinka iyo weelasha | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | 05/05/2021 22:02 | Dib u warshadaynta
Sababtoo ah faafida caalamiga ah ee loo yaqaan 'coronavirus' waxaan haynaa xaqiiqo cusub oo aan kula noolaano waji duub. Labada waji, galoofis, iyo jel jeermiska dilaa waa qayb ka mid ah maalinteenna maanta. Badeecadahan badankood waa lagama maarmaan marka la eego duruufaha ka hortagga fayraska. Ku dhowaad dhammaantood waa la tuuri karaa waxaana laga yaabaa inaan ka shaki qabno sida ugu habboon ee loo maareeyo qashinka. Dad badan ma oga meeye wajiyadii la iska tuuray waxayna ku dambeeyaan maamul xumo.
Sidaa darteed, waxaan u hibeyn doonnaa qodobkaan si aan kuugu sheegno meesha waji-tuurka lagu tuurayo iyo waxa ku habboon in lagu sameeyo.
1 Halka waji-ka-tuurista lagu tuurayo
2 Dhig qashinka faafa
3 Xagee waasaska la tuuraa: waxa lagu sameeyo iyaga
4 Gacmo gashi iyo jel jeermiska dilaa
Waxaa jira qashin fara badan oo laga abuuray dharka dharka lagu dhaqdo ee aan ku nool nahay. Midda ugu horreysa oo dhan waa in la ogeysiiyo dadka in galoofyada iyo waji-gashiga aan lagu tuuri karin waddooyinka dadweynaha ama berrinka. Waa lagama maarmaan in la tuuro qashinka keydkooda qashinka ee u dhigma maaraynta saxda ah. Waxay lagama maarmaan u yihiin ilaalinta caafimaadkeena laakiin sidoo kale waa inaan ilaalino caafimaadka deegaankeena. Haysashada jawi caafimaad qaba waa lama huraan haddii aan dooneyno inaan si wanaagsan ugu noolaano. Waxaa laga yaabaa inaan ka shaki qabno habka ku habboon ee loo maareeyo dhammaan qashinka. Mashruuca Libera, asal ahaan isbahaysi ay sameeyeen Ecoembes iyo SEO / BirdLife, ayaa looga digay faafitaanka qashinka noocan ah ee ka dhashay faafida.
Waxa kaliya ee la weydiiyaa waa dadweynaha inay daryeelaan caafimaadka meeraha iyagoo iska ilaalinaya ka tagista galoofyada iyo waji-xidhka ku dambeeya meelaha dabiiciga ah iyo wasakheynta deegaanka. Daraasado kaladuwan ayaa cadeynaya in cudurada cudurada keena, oo ay kujiraan kuwa nool, ay qashinka ugu isticmaali karaan vector ahaan balaarin. Si kale haddii loo dhigo, hadba inta qashinka uu ku badan yahay deegaanka, ayay u badan tahay in ay halistu ugu dambayn ku fido meelo kale.
Dhig qashinka faafa
Waa muhiim in la ogaado halka ay wejiga qarsadaan ee lagu tuurayo, iyo waxyaabaha kale ee maalinlaha ah ee aan u isticmaalno cudurkan faafa. Tilmaamaha ku saabsan maareynta qashinka inta lagu jiro xaaladda dhibaatada caafimaad ee ay sababtay COVID-19 waxaa xukuma Wasaaradda Caafimaadka ee Amarka SND / 271/2020, oo lagu daabacay Faafinta Rasmiga ah ee Maarso 22. Gacan-gashiyada iyo waji-gashiga waa in lagu rido weelka qashin-qubka, oo ah cawl ama cagaar iyadoo ku xiran degmada aan joogno.. Waa weelka ay dhammaan qashinka aan lahayn weel dib-u-warshadayn gaar ahi u galaan degmooyinkaas aan lahayn qaybtii dabiiciga ahayd ee la hirgeliyey.
Waxaan xasuusnaano inay jiraan meelo qaar oo qaybtani ay tahay weel gooni ah midabkiisuna yahay bunni. Xaaladdan oo kale, kaliya qashinka dabiiciga ah sida qashinka cuntada iyo manjooyin jardiinada waa in la dhigaa. Degmooyinka aysan ku jirin weel bunni ah oo kaliya weel cawl, halkaan ayaa lagu tuuraa indha-shareerka.
Tilmaamaha keydinta qashinka ee safka faafa way ku kala duwan yihiin dadka karantiilku yahay awooda qareenka ee guriga dhibka ama ka soo gaadhay coronavirus. Dadkan waa in lagu go'doomiyaa qol qashinkooduna wuxuu xiriir toos ah la leeyahay dadkan ama waa la maareeyay. Sidaa darteed, waa inaad leedahay daaweyn ka duwan. Marooyinka waa in lagu soo ururiyaa boorso ku taal isla qolka oo la xidho oo lagu rido bac labaad. Boorsadani waxay ku xidhan tahay albaabka qolka iyo sidoo kale inay dhigato galoofyada iyo walxaha uu isticmaalo qofka u janjeera bukaanka. Bacda labaad sifiican ayaa loo xidhi karaa waxaana lagu ridi karaa qashinka taas oo u qalanta cinwaanka qashinka wax walbana waxaa lagu tuuraa weelka cawlan ama cagaarka ah.
Meelaha qaarkood oo ay ku dhacdo gaar ah coronavirus sidoo kale Waa suurtogal in la kiciyo weelal gaar ah qashinka noocan ah. Guriga dadka waayeelka ah ee diirada la saaray, weelka noocan ah ee gaarka ahi waa Elizabethan si loogu xareeyo qashinka dadka qaba ama ku dhacay COVID.
Xagee waasaska la tuuraa: waxa lagu sameeyo iyaga
Waan ognahay in waji-gashiga marhoreba ay ka mid yihiin hawl maalmeedkeena. Waa qasab in meelkasta la geeyo mar haddii aan bannaanka u baxno. Macno malahan hadii aan u hogaansami karno masaafada nabada ee ay dejisay wasaarada caafimaadka. Muwaadin kasta waa inuu ku xirtaa wadada, jardiinooyinka ama marka uu sameynayo howlo isboorti. Intaa waxaa dheer, dukaamada iyo dukaamada waaweyn sidoo kale waa ficil ahaan waa qasab.
Dhamaanteen waxaan leenahay khaanad waji saaris guriga dhexdiisa waana kuwo horey nolosheena qeyb uga ahaa. Gacan-gashiyada iyo fayadhowrka fayadhowrka ayaa noqday alaab lagama maarmaan u ah xaaladdan aan caadiga ahayn. Dhammaantood waa la wada tuuri karaa waxaana jira shaki badan markii lagu ridayo weel kala duwan. Sidii aan horeyba u soo sheegnay, waji-xidhka waa in lagu shubaa weelasha cawliga ah halka ay u socdaanna waa qashin qubka ama qashinka lagu gubo. Waxay kuxirantahay halka aan jogno iyo hadii uu jiro qashin gubaya iyo hadii kale, waxaan adeegsan karnaa waji daboolka loo isticmaalay in lagu dhaliyo tamar ama lagu kaydiyo.
Waxa ugu muhiimsani waa in la ogeysiiyo dadka in aan lagu tuurin dariiqa ama ay ku sumoobaan deegaanka iyaga oo ku tuuraya berrinka. Waxaan horay u soo sheegnay in fayrasyada qaar ay ka faa’iideysan karaan xaddiga qashinka lagu shubo berrinka si ay u faafiyaan una ballaariyaan dhulkooda. Sidaa darteed, waa in lagu xisaabtamo in waji-xidhka lagu shubo weelka cawlan.
Gacmo gashi iyo jel jeermiska dilaa
Gacan-gashiyada waxaa laga sameeyay cinjirka ama 'nitrile' muwaadiniinta qaarkoodna waxay u isticmaalaan inay wax ku iibsadaan. Waa in aan waligood lagu ridin weelka jaallaha ah sidoo kale weelka qashinka waa in lagu shubaa. Marka laga hadlayo jel iyo waxyaabaha kale ee jeermiska dilaa, waxaa lagu tuuraa weelka weelka jaalaha ah tan iyo markii loola dhaqmo sida alaabada kale ee nadiifinta.
Sidaad u aragto, aafadan faafa waxay soo saartay qashin saa'id ah oo ay tahay inaan ogaano sida dib loogu warshadeeyo. Ogaanshaha halka wejiga loo tuuro waxay fure u tahay daryeelka deegaankayaga magaalada iyo dabiiciyan labadaba.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto meesha wajiyadda loo tuuro iyo waxa lagu sameeyo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Dib u warshadaynta » Halka waji-ka-tuurista lagu tuurayo